About the documentary မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်အကြောင်း
About the filmmakers မှတ်တမ်းရုပ်ရှင် ရိုက်ကူးထုတ်လုပ်သူများ
Climate smart agriculture Climate Smart စိုက်ပျိုးရေး
A documentary on climate change and agriculture. This isajourney across Myanmar exploring the lives of farmers and how they are affected by climate change.
စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍအပေါ် ကျရောက်လျက်ရှိသော ရာသီဥတုဖောက်ပြန်လာမှု၏ သက်ရောက်မှုများအား မှတ်တမ်းတင်ထားသည့် မှတ်တမ်းရုပ်ရှင် မြန်မာနိုင်ငံရှိ နေရာဒေသအနှံ့အပြားမှ တောင်သူလယ်သမားများ၏ ဘဝဇာတ်ကြောင်းများနှင့် ၎င်းတို့၏ ဘဝအပေါ် သက်ရောက်မှုများရှိနေသော ရာသီဥတုပြောင်းလဲလာမှု
One of the things which brings people together is Earth, because we are all on it.
အားလုံးနထေိုငျကွတဲ့ ကမ်ဘာမွကွေီးကတော့ ကြှနျတျော ကြှနျမတို့ကို ပေါငျးစညျးစတေဲ့အရာတှထေဲက တဈခုပါပဲ။
Changes in the Fields is an environmental feature documentary following the lives of farmers in Myanmar and explores the challenges they face that are exacerbated by climate change.
စိုက်ကွင်းထဲက ပြောင်းလဲမှုများ (Changes in the Fields) ဆိုသည်မှာ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်တစ်ခုဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံရှိ တောင်သူလယ်သမားများ၏ ဘဝဇာတ်ကြောင်းများနှင့် ရာသီဥတုပြောင်းဖောက်ပြန်လာမှုကြောင့် ကြုံတွေ့နေရသော ၎င်းတို့၏ အခက်အခဲစိန်ခေါ်မှုများကို တင်ဆက်ထားခြင်းဖြစ်သည်
Agriculture is one of the most vulnerable sectors to the impacts of climate change. As we interview farmers in different parts of Myanmar, we discover how their daily lives are affected byachanging climate.
ရာသီဥတုဖောက်ပြန်လာမှု၏ဒဏ်ကို အဆိုးရွားဆုံးခံစားနေရသော ကဏ္ဍများတွင် စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍက တစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံရှိ နေရာဒေသပေါင်းစုံမှ တောင်သူလယ်သမားများနှင့် မေးမြန်းဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ခဲ့ပြီးနောက် ၎င်းတို့၏ နေ့စဉ်ဘဝအပေါ်တွင် သက်ရောက်မှုများရှိနေသော ရာသီဥတုပြောင်းလဲလာမှု၏ အကျိုးဆက်များကို လေ့လာခွင့်ရရှိခဲ့သည်။
This documentary reveals the devastating impacts of climate change on agriculture, and offersapath towards sustainable practices foragrowing population.
စိုက်ပျိုးကဏ္ဍအပေါ်တွင် သက်ရောက်မှုများရှိနေသော ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှု၏ ကြောက်မခန်းလိလိ ဆိုးကျိုးများကို ဤမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်တွင် တင်ဆက်ထားသည်။ လူဦးရေတိုးပွားလာသည်နှင့်အမျှ ရေရှည်တွင် လိုက်လျောညီထွေရှင်သန်နေထိုင်နိုင်မည့် နည်းလမ်းအလေ့အထများကိုလည်း အကြံပြုတင်ဆက်ထားပါသည်။
It is now time to learn, once again, how to live in partnership with nature.
We wanted to address the challenges and thought it was essential to fosteraplatform for dialogue around climate change in Myanmar, from the perspective of local farmers. We also wanted to gain more traction in this area from international non-governmental organisations, the private sector, civil society organisations, and the government.
In May 2019, we first met and discussed ideas about how to create suchaplatform. We thought that by producingadocumentary about the impact of climate change on agriculture, we could raise awareness about the issue. We were able to delve into topics such as climate smart agriculture methods, organic farming, food security issues, slash and burn practices, as well as research deforestation, sea level rise, erosion, the Myanmar government’s policy and legal framework on climate change, its programmes and partnerships, and much more…
In May 2020, we are proud and happy to share our work with you.
ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် ဤအခက်အခဲများကို စုံလင်စွာ တင်ဆက်ပြသလိုပြီး ဒေသတွင်း တောင်သူလယ်သမားများ၏ ရှုထောင့်အမျိုးမျိုးမှ ဆွေးနွေးထားသော မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း လက်ရှိ ရာသီဥတုပြောင်းလဲလာမှုများအကြောင်းကို ဆွေးနွေးခန်းဖွင့်နိုင်ရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။ ထို့အပြင် ဤအကြောင်းအရာကို နိုင်ငံတကာမှ အစိုးမရမဟုတ်သာ အဖွဲ့အစည်းများ၊ ပုဂ္ဂလိကပိုင်အဖွဲ့အစည်းများ၊ လူထုအခြေပြုအဖွဲ့အစည်းများ နှင့် အစိုးရထံမှ ဂရုပြုမှုပိုမိုရရှိစေရန်လည်း ရည်ရွယ်ပါသည်။
၂ဝ၁၉ ခုနှစ် မေလတွင် ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး တွေ့ဆုံ၍ အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သော ဆွေးနွေးခန်းမျိုးကို မည်သို့ဖော်ဆောင်ရမည်နည်း ဟု တိုင်ပင်ခဲ့ကြပါသည်။ စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍအပေါ်ရှိ ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှု၏ သက်ရောက်မှုများအကြောင်းကို မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်တစ်ခုအဖြစ် ရိုက်ကူးထုတ်လုပ်ပါက ဤဖြစ်ရပ်များကို လူအများပိုမိုသိရှိလာနိုင်လိမ့်မည်ဟု မျှော်မှန်းခဲ့ကြသည်။ မိမိတို့အနေဖြင့် climate smart စိုက်ပျိုးရေး နည်းစနစ်များ၊ အော်ဂဲနစ်စိုက်ပျိုးရေးများ၊ အစားအသောက်မဖူလုံမှုပြဿနာများ၊ တောင်ယာမီးရှို့ အလေ့အထများ၊ သစ်တောပြုန်းတီးမှုများ၊ ရေမျက်နှာပြင်မြင့်တက်လာခြင်း၊ မြေပြိုခြင်း၊ ရာသီဥတုပြောင်းလဲလာမှုနှင့်ပတ်သက်၍ ပြဌာန်းထားသော မြန်မာအစိုးရ၏ မူဝါဒနှင့် ဥပဒေများ၊ စီမံကိန်းများ၊ ပူးပေါင်းလက်တွဲဖော်များစသည့် ခေါင်းစဉ်များကို လေ့လာနိုင်ခဲ့ပါသည်။
၂ဝ၂ဝ ခုနှစ် မေလတွင်တော့ ကျွန်ုပ်တို့၏ ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများကို အားလုံးနဲ့အတူတကွ မျှဝေခွင့်ရသည့်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် ဝမ်းသာလှိုက်လှဲစွာ ဂုဏ်ယူမိပါသည်။
We live inacountry where the air is always warm and humid, where as the sun sets it emits vivid colors of reds and pinks, where the monsoon season lasts for5months on average, starting in May and ending in September, where the wind is barely heard, where in some areas humans live alongside elephants, tigers and monkeys. But for how much longer?
We are all feeling the effects of climate change already, that has been amplified by human activities within the past century. However, the impacts are felt differently across the world and developing countries and vulnerable communities are the most susceptible.
According to the German Watch 2020 Global Climate Risk Index, Myanmar was identified as the second most affected country by extreme weather events worldwide. An example of this can be highlighted by the cyclone Nargis that hit the country in 2008. The cyclone produced an estimated $10 Bn USD worth of damage, affected 2.4 million people, and caused approximately 140,000 fatalities. The cyclone is regarded as one of the worst natural disasters to have ever occurred in Southeast Asia.
Recent WWF research confirms that Myanmar’s climate is expected to change dramatically, as it is likely to be faced with rising temperatures in several areas and impacted by sea level rise.
Myanmar isaplace of belief and tradition, where deep relationships between the land and humans are still present. More than 70% of the population work in agriculture, and it isavital sector to the country’s economy. At the same time, agriculture is also one of the most affected sectors by climate change, impactingavast number of people in value chains, from farmers to consumers.
Unpredictable weather changes playamajor role in local agricultural practices. In order to overcome the felt impacts of climate change, farmers in Myanmar have resulted to increase their use of pesticides, causing more environmental damage and contributing to health and food security issues.
Climate change has multiple effects on agriculture, some of which include:
Increased spread of various pests
Fluctuations in water quality and quantity, due to heatwaves and droughts
Destroyed crops due to flooding and irregular rainfall
Changes in the cropping calendar
Salinisation of the soil due to sea level rise, making land unusable for agriculture
Loss of local livelihoods
ကျွန်ုပ်တို့မှီတင်းနေထိုင်နေကြသော ဤနိုင်ငံအတွင်းရှိလေမှာ အမြဲတမ်းပူနွေးစိုထိုင်းလျက်ရှိပြီး ဆည်းဆာနေ၏ ရောင်ခြည်မှာလည်း အနီရောင်၊ ပန်းရောင်တို့ဖြင့် တောက်ပစွာဖြာထွက်နေလျက်ရှိသည်။ မုတ်သုံရာသီမှာ ပျမ်းမျှအားဖြင့် ၅ လ ကြာရှည်ကာ မေလတွင် စတင်၍ စက်တင်ဘာလတွင် အဆုံးသတ်သည်။ လေတိုက်သံကို တော်ရုံတန်ရုံဖြင့် မကြားရသော်လည်း အချို့ဒေသများတွင် လူ နှင့် ဆင်၊ ကျား၊ မျောက် စသည့် သတ္တဝါများ ယှဉ်တွဲနေထိုင်ကြလျက်ရှိသည်။ သို့သော်… ဤသည့်အရာများ မည်မျှအထိကြာရှည်ခံမည်နည်း?
ရာသီဥတုဖောက်ပြန်လာမှု၏ အကျိုးဆက်များကို ကျွန်ုပ်တို့အားလုံး ခံစားနေရပြီး လွန်ခဲ့သော ရာစုနှစ်အတွင်းတွင် ပြုမူဆောင်ရွက်ခဲ့သော လူသားများ၏ ဆောင်ရွက်မှုများကြောင့် ပိုမိုဆိုးရွားလာခဲ့သည်။ ကမ္ဘာပေါ်တွင် အကျိုးသက်ရောက်မှုများ က အခြေအနေပေါ်မူတည်၍ ကွဲပြားလျက်ရှိပြီး ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများ နှင့် အကာအကွယ်မဲ့သော လူမှုအသိုက်အဝန်းများအတွက် အဆိုးရွားဆုံး သက်ရောက်လျက်ရှိသည်။
German Watch 2020 Global Climate Risk Index, အရ မြန်မာနိုင်ငံသည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် ရာသီဥတုအပြောင်းအလဲ ဒုတိယမြောက် အပြင်းထန်ဆုံးသောနိုင်ငံဖြစ်သည်။ ဥပမာ - ၂ဝဝ၈ ခုနှစ်တွင် တစ်နိုင်ငံလုံးကြုံတွေ့ခဲ့ရသော နာဂစ်မုန်တိုင်းပင်ဖြစ်သည်။ ဤဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းကြောင့် ကန်ဒေါ်လာ ၁ဝ ဘီလီယံနှင့် ညီမျှသော ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ရုံသာမက လူဦးရေ ၂.၄ သန်း အထိ ထိခိုက်နစ်နာခဲ့ရပြီး လူအသေအပျောက် ၁ သိန်း ၄ သောင်းခန့်အထိ ရှိခဲ့သည်။ ဤမုန်တိုင်းသည် အရှေ့တောင်အာရှရှိ အဆိုးရွားဆုံးသော သဘာဝဖြစ်စဉ်များထဲတွင် တစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်သည်ဟု သတ်မှတ်ထားကြသည်။
WWF ၏ သုတေသနအရ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ရာသီဥတုမှာ ပြင်းထန်စွာပြောင်းလဲလာနိုင်မည်ဟု အတည်ပြုထားပြီး နေရာဒေသအများအပြားတွင် အပူချိန်မြင့်တက်လာမှုနှင့် ရေမျက်နှာပြင်မြင့်တက်လာမှုတို့ကို ကြုံတွေ့လာနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။
မြန်မာနိုင်ငံသည် ယုံကြည်သက်ဝင်မှုများနှင့် ဓလေ့အစဉ်အလာ စုံလင်သောဌာနေဖြစ်ပြီး လူသားများနှင့် ကမ္ဘာမြေကြားတွင် ဆက်နွယ်မှုများ နက်ရှိုင်းစွာရှိနေသေးသောနိုင်ငံ တစ်နိုင်ငံလည်းဖြစ်သည်။ စုစုပေါင်း လူဦးရေ၏ ၇ဝ% မှာ စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍတွင် လုပ်ကိုင်စားသောက်နေကြသည်ဖြစ်ပြီး ဤကဏ္ဍမှာ နိုင်ငံ့စီးပွားရေးအတွက် အရေးပါသောအပိုင်းလည်း ဖြစ်သည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင် စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍသည် ရာသီဥတုဖောက်ပြန်လာမှုဒဏ်ကို အဆိုးရွားဆုံးခံစားနေရသော ကဏ္ဍတစ်ခုလည်း ဖြစ်သည်။ ထိုဖြစ်စဉ်ကြောင့် တောင်သူလယ်သမားများမှစ၍ စားသုံးသူများအဆုံး၊ လူအများအပြား၏ ဈေးကွက်ကိုထိခိုက်နေလျက်ရှိသည်။
ခန့်မှန်းရမလွယ်သော ရာသီဥတုအပြောင်းအလဲများကြောင့်လည်း ဒေသတွင်းစိုက်ပျိုးရေးအပေါ်တွင် အဓိက သက်ရောက်မှုများရှိနေသည်။ ရာသီဥတုဖောက်ပြန်လာမှု၏ဒဏ်ကို အခြေအနေအရ ကျော်လွှားနိုင်ရန် မြန်မာနိုင်ငံရှိ တောင်သူလယ်သမားများအနေဖြင့် ပိုးသတ်ဆေးများ ပိုမိုသုံးစွဲလာသောကြောင့် ယခုအခါ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အတွက် ပိုမိုထိခိုက်လျက်ရှိကာ ကျန်းမာရေးနှင့် အစားအသောက်ဖူလုံမှုများ အပေါ်တွင်လည်း သက်ရောက်မှုများရှိလျက်ရှိသည်။
စိုက်ပျိုးရေးအပေါ်တွင် ရာသီဥတုပြောင်းလာမှု၏ သက်ရောက်မှုအမျိုးမျိုးရှိနေသည်။ ဥပမာ အချို့မှာ
အပူလှိုင်းများနှင့် မိုးခေါင်မှုများကြောင့် ရေအရည်အသွေးနှင့် ရေပမာဏ မတည်မငြိမ်ဖြစ်ခြင်း
ရေကြီးမှုနှင့် ပုံမှန်မဟုတ်သော မိုးရွားသွန်းမှုများကြောင့် ကောက်ပဲသီးနှံများ ပျက်ဆီးဆုံးရှုံးခြင်း
ရေမျက်နှာပြင်မြင့်တက်လာသည်နှင့်အမျှ မြေဆီလွှာထဲတွင် အငန်ဓာတ်များ ပိုမို စိမ့်ဝင်မြင့်တက်လာပြီး စိုက်ပျိုးမြေအဖြစ် အသုံးပြု၍မရတော့ခြင်း
We are very thankful to our three partners and sponsors - GIZ, Helvetas Myanmar and ICCO Cooperation. With their support we had access to information from their projects which integrate climate smart agriculture methods. We also had access to stories from farmers and their practices across Myanmar, including Ywangan Township (Shan State), Bilin Township (Mon State), and Ywangan Township (Yangon Region).
We conducted interviews with more than ten farmers and agronomists. We visited Yezin Agriculture University’s Climate Smart Agriculture Centre, where we were able to haveadiscussion with Dr Yarzar Hein from the Department of Agricultural Economics. We also managed to obtain an interview from the Department of Meteorology & Hydrology.
Before every filming trip, we conducted field visits and documented the challenges and solutions applied by farmers in the face of climate change.
We would like to express warm and grateful thanks to our filming crew from Next Media Production for their work, to our editor Mi Mi Kyaw Lwin from the Yangon Film School, our animator Zaw Bo Bo Hein from Kyarsityoe Animation, the translators, research people and everyone who supported us along the project.
ကျွန်ုပ်တို့ကို အဓိက ကူညီပံ့ပိုးပေးသည့် ကျွန်ုပ်တို့၏ ပူးပေါင်းလက်တွဲဖော်များနှင့် ပံ့ပိုးပေးသူများဖြစ်ကြသည့် GIZ၊ Helvetas Myanmar နှင့် ICCO Cooperation တို့ကို အထူးပင် ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။ ၎င်းတို့၏ ကူညီထောက်ပံ့မှုများကြောင့် climate smart စိုက်ပျိုးရေးနည်းစနစ်များကို အကောင်အထည်ဖော်နေသည့် ၎င်းတို့၏ စီမံကိန်းများမှ အချက်အလက်များကို ရရှိခဲ့သည်။ ရွာငံမြို့ (ရှမ်းပြည်နယ်)၊ ဘီးလင်းမြို့ (မွန်ပြည်နယ်) နှင့် ရွာငံမြို့ (ရန်ကုန်တိုင်း) အပါအဝင် မြန်မာနိုင်ငံရှိ နေရာဒေသအမျိုးမျိုးမှ တောင်သူလယ်သမားများ၏ ဘဝဇာတ်ကြောင်းများနှင့် နည်းစနစ်အလေ့အထများကို ရှာဖွေလေ့လာခွင့်ရရှိခဲ့သည်။
ကျွန်ုပ်တို့မှနေ၍ တောင်သူလယ်သမား နှင့် သီးနှံစိုက်ပျိုးသူ ဆယ်ဦးကျော်အား အင်တာဗျူးများ မေးမြန်းခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် ရေဆင်းစိုက်ပျိုးရေးတက္ကသိုလ် ၏ Climate Smart Agriculture Center သို့ သွားရောက်လေ့လာ၍ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင် ဒေါက်တာရာဇာဟိဏ်း နှင့်လည်း ဆွေးနွေးခွင့်ရရှိခဲ့သည့်အပြင် မိုးလေဝသနှင့် ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနနှင့်လည်း ဆက်သွယ်မေးမြန်းခွင့်ရရှိခဲ့သည်။
ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးရေးခရီးမစခင် ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဒဏ်ကို ရင်ဆိုင်နေရသော တောင်သူလယ်သမားများ၏ အခက်အခဲများကို ကျွန်ုပ်တို့ ကိုယ်တိုင်သွားရောက်လေ့လာ၍ ၎င်းတို့၏ အခက်အခဲများနှင့် ဖြေရှင်းချက်များကို မှတ်တမ်းတင်ခဲ့ပါသည်။
မိမိတို့အနေဖြင့် Next Media Production မှ ရိုက်ကူးရေးဝိုင်းတော်သားများ၊ Yangon Film School မှ မမီမီကျော်လွင်၊ Kyarsityoe Animation မှ Animator ကိုဇော်ဗိုလ်ဗိုလ်ဟိန်း၊ ဘာသာပြန်များ၊ သုတေသနပြုစုသူများ နှင့် ဤပရောဂျက်အား အဘက်ဘက်မှ ဝိုင်းဝန်းကူညီပေးကြသော ကျေးဇူးတင်ထိုက်သူအားလုံးကို ကျေးဇူးအထူးပင်တင်ရှိပါသည်။
Tomas Derville’s environmental awakening came after watching the documentary Before the Flood. Since then, he promised himself to strive to raise awareness about climate change and created the Facebook page ‘Climate Change Awareness Movement’.
After moving to Myanmar in 2017, Tomas fell in love with the country and has lived there ever since, working asaconsultant on advocacy and sustainable issues. Tomas is currently studyingaMasters in Climate Change and Development at SOAS University of London.
Before the Flood ဟု ခေါ်သော မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်တစ်ကားကို ကြည့်ပြီးသည့်နောက်မှာတော့ Thomas Derville တစ်ယောက် ရဲ့ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အသိပညာ နိုးကြားလာခဲ့ပါတယ်။ ထိုအချိန်မှစ၍ ၎င်းအနေဖြင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ပတ်သက်၍ လူအများပိုမိုသတိပြုမိစေရန် ပြုမူရမည်ဟု သန္နိဌာန်ချမှတ်ခဲ့ကာ Climate Change Awareness Movement.
စတင်ခဲ့ပါတယ်။ ၎င်းက မြန်မာနိုင်ငံကို ၂ဝ၁၇ ခုနှစ်တွင် စတင်ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ခဲ့ပြီး ထိုအချိန်မှစ၍ ယနေ့အထိတိုင် ဤနိုင်ငံကို ခင်တွယ်သောကြောင့် ဆက်လက်နေထိုင်လျက်ပင်ရှိပြီး ဥပဒေအကြံပြုခြင်း (သို့) ရေရှည်တည်တံ့နိုင်မည့်နည်းလမ်းများနှင့် ပတ်သက်၍ အတိုင်ပင်ခံတစ်ဦးအဖြစ် လုပ်ကိုင်လျက်ရှိပါတယ်။ လက်ရှိတွင် Tomas က လန်ဒန်မြို့ရှိ SOAS တက္ကသိုလ်တွင် Climate Change and Development ဘွဲ့လွန် ကို တက်ရောက်လျက်ရှိပါတယ်။
How to make people more aware? More conscious about the importance of nature? About self-respect, mutual respect? How does one respond to greediness with more altruism? Through her curiosity, she’s met, lived and worked with people of different backgrounds, cultures and beliefs. Her pleasures lie in geographical explorations, observing human behavior, analysing social norms and cultural symbols, which all contribute to her understanding of the systems we are part of and the values we adhere to. Beatrice is motivated by social movements and people who take action in tackling social, economic and environmental justice.
အရာတစ်ခုကို လူတွေပိုသတိပြုမိလာအောင် ဘယ်လိုလုပ်လဲ? သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို ပိုဂရုပြုမိလာအောင် ဘယ်လိုလုပ်လဲ? မိမိကိုယ်ကိုလေးစားမှုတို့ တန်းတူညီတူလေးစားမှုတို့ အကြောင်းဆိုရင်ကော? လောဘကြီးခြင်းကို ကိုယ်ကျိုးစွန့်ခြင်းနဲ့ ဘယ်လိုတုန့်ပြန်နိုင်မလဲ? ဒီမေးခွန်းတွေဟာ Beatrice သူ့ကိုယ်သူ နေ့တိုင်း မေးဖြစ်နေတဲ့မေးခွန်းတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူမက စပ်စပ်စုစုရှိတတ်ပြီး နောက်ခံ၊ ယဉ်ကျေးမှု၊ ယုံကြည်မှုအမျိုးမျိုးရှိကြတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ တွေ့ဆုံဖူး၊ အတူတကွ နေထိုင်ဖူး၊ အလုပ်လုပ်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ သူမဟာ ကမ္ဘာကြီးမှာ ခြေဆန့်ခြင်း၊ လူသားတွေရဲ့ အလေ့အထတွေကို စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်း၊ လူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့ စည်းမျဉ်းတွေနဲ့ ယဉ်ကျေးမှု အထိမ်းအမှတ်တွေကို ဆန်းစစ်ခြင်း စတာတွေကို ဝါသနာပါတာကြောင့် သူမအနေနဲ့ မိမိတို့လူသားတွေအားလုံး ပါဝင်ရှင်သန်ကျက်စားနေကြတဲ့စနစ်အကြောင်း ကို ပိုမိုသဘောပေါက်လာခဲ့ပါတယ်။ သူမဟာ လူမှုရေးလှုပ်ရှားမှုများနဲ့ လူမှုရေး၊ စီးပွားရေး နှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တို့အတွက် တရားမျှတမှုရှိအောင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေကြသော ပုဂ္ဂိုလ်များကို အားကျအတုယူတတ်သူတစ်ဦးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
Climate Smart စိုက်ပျိုးရေး
Climate smart agriculture practices are currently being researched and implemented across Myanmar. Some methods include changes in the cropping calendar and introducing good quality, or short cycle seeds varieties that are more resistant to pests and diseases. To save land preparation, zero tillage technology can be used. Water management systems need to be upgraded with proper technologies. Soil fertility programs also need to be improved. The use of organic fertilizers and composts favor better crop yields and resilience to the impacts of climate change. The provision of sufficient agriculture equipment can be used asaway to increase local livelihoods.
Although climate smart agriculture practices are expected to boost food security and climate change mitigation efforts in resource-poor smallholder farming system, the barriers that can restrict its uptake are diverse. Non-adoption is oftenaresult of insufficient financial capital, water scarcity or lack of technical knowledge.
In countries where the economy is heavily based on agriculture, developing the agricultural sector is an effective measure in reducing poverty. However, agricultural expansion for food production and economic development places more pressure on soil, water, biodiversity, forests and fragile ecosystems.
Agriculture has to simultaneously address three intertwined challenges:
Climate Smart စိုက်ပျိုးရေးနည်းစနစ် ကို မြန်မာနိုင်ငံနေရာဒသအနှံ့အပြားတွင် အသုံးချ၊ သုတေသနပြုလျက်ရှိသည်။ ထိုထဲက အချို့သောနည်းလမ်းများထဲတွင် စိုက်ပျိုးရေးရာသီ ကို ပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်းများ၊ ပိုးမွှားများ နှင့် ရောဂါများအား ပိုမိုခံနိုင်ရည်ရှိသည့် မျိုးစေ့အမျိုးအစားများ (သို့) အရည်အသွေးကောင်းမွန်သော မျိုးစေ့များကို မိတ်ဆက်အသုံးပြုခြင်းများ စသည်တို့ပါဝင်သည်။ မြေပြင်ဆင်ရာတွင် သက်သာမှုရှိစေရန် ထွက်ယက်မှုမပါဝင်သော နည်းပညာများကိုလည်း အသုံးပြုနိုင်သည်။ ရေစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်များကို သင့်တင့်လျောက်ပတ်သော နည်းပညာများအသုံးပြု၍ တိုးမြှင့်ရမည် ဖြစ်သည်ပြီး
မြေသြဇာအတွက် ထားရှိထားသော အစီအစဉ်များကိုလည်း ပိုမိုကောင်းမွန်လာအောင် ဆောင်ရွက်ရမည် ဖြစ်သည်။ သီးနှံအထွက်နှုန်းကို ရာသီဥတုဖောက်ပြန်လာမှုဘေးမှ သက်သာစေရန် သဘာဝမြေသြဇာများ ကို အသုံးပြုနိုင်သည်။ စိုက်ပျိုးရေးပစ္စည်းများကို အလုံအလောက် သတ်မှတ်ပေးခြင်းသည် ဒေသတွင်း လူမှုအသိုက်အဝန်းအတွက် အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေနိုင်မည့် နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
စိုက်ပျိုးရေးကို အဓိကအားထားသော နိုင်ငံများရှိ ဆင်းရဲမှုနှုန်းကို ထိထိရောက်ရောက် လျော့နည်းစေသော လုပ်ရပ်မှာ စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍကို ပိုမိုမြှင့်တင်ဆောင်ရွက်ခြင်းပင် ဖြစ်သည်။ အစားအသောက်ကုန် ထုတ်လုပ်မှုအတွက် လုပ်ငန်းချဲ့ထွင်ခြင်းများ နှင့် စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတို့ကြောင့် မြေဆီလွှာ၊ ရေ၊ ဇီဝကွဲပြားစုံလင်မှု၊ သစ်တောများ နှင့် ထိလွယ်ရှလွယ်သော ဂေဟစနစ်များအပေါ်တွင် ဖိအားပေးမှုများ ရှိနေသည်။
စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍတွင် တစ်ခုနှင့်တစ်ခု ဆက်စပ်နေသော စိန်ခေါ်မှုသုံးမျိုး ဖြေရှင်းရာတွင် -
Increase productivity to ensure food security
Adapt to the increasing impacts of climate change
အစားအသောက်ဖူလုံမှုရှိစေရန် ထုတ်လုပ်မှုကို တိုးမြှင့်ခြင်း
ပိုမိုဆိုးရွားလျက်ရှိသော ရာသီဥတုပြောင်းလဲလာမှု၏ ဒဏ်နှင့် သင့်တင့်လျောက်ပတ်အောင် ပြုမှုခြင်း
ရာသီဥတုပြောင်းဖောက်ပြန်လာမှု လျော့ကျစေရန် ပူးပေါင်းပါဝင်ခြင်း တို့ပါဝင်သည်။
Approaches to climate smart agriculture include:
Climate smart စိုက်ပျိုးရေးနည်းစနစ်အား အကောင်အထည်ဖော်ရန် ချဉ်းကပ်ရာတွင် -
Promoting activities that increase carbon storage
ကာဗွန်သိုလှောင်မှုအား ပိုမိုမြှင့်တင်ပေးသည့် လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်မှုများကို မြှင့်တင်အားပေးခြင်း
Reducing methane and other emissions from agriculture including livestock, rice fields and the use of fertilizers
မွေးမြူရေး၊ စပါးခင်း နှင့် မြေသြဇာအသုံးပြုခြင်းများ အပါအဝင် စိုက်ပျိုးရေးဆောင်ရွက်ချက်များမှ ထုတ်လွှတ်လိုက်သော မီသိန်းနှင့် အခြားဓာတ်ငွေ့များ ထုတ်လွှတ်မှုနှုန်းကို လျှော့ချခြင်း
Diversifying genetic traits of crops to help farmers hedge against an uncertain climate
တောင်သူလယ်သမားများအနေဖြင့် မရေရာမသေချာသော ရာသီဥတု ကို တွန်းလှန်ရာတွင် ထောက်ပံ့ကူညီနိုင်ရန် ကောက်ပဲသီးနှံမျိုးစေ့များအား ပိုမိုကွဲပြားစုံလင်စေခြင်း
Disseminates timely climate information to farmers (through radio, phone messaging, etc...)
ရာသီဥတုနှင့်ပတ်သက်သော သတင်းအချက်အလက်များကို တောင်သူလယ်သမားများထံသို့ အချိန်နှင့်တပြေးညီ သတင်းတင်ဆက်နိုင်ခြင်း (ရေဒီယို၊ ဖုန်းမက်ဆေ့ခ်ျ စသဖြင့်တို့ မှ တစ်ဆင့်)
Seek to increase yields per unit of land to meet today’s needs without exceeding current resources
လက်ရှိအခြေအနေ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းရာတွင် ရှိပြီးသား အရင်းအမြစ်များကို လိုအပ်သည်ထက်ပို၍ မသုံးမိစေရန် မြေယူနစ်တစ်ခုချင်းစီရှိ ကောက်ပဲသီးနှံများ၏ အထွက်နှုန်းကို တိုးပွားစေမည့်နည်းများကို ရှာဖွေခြင်း တို့ပါဝင်သည်။
Here you can findalist of references used in our research.
Erosion - Gulf of Mottama
Greenhouse gas emissions, pesticides, and organic farming
Myanmar government climate change framework
ဤနေရာတွင် ကျွန်ုပ်တို့ မှီငြမ်းအသုံးပြုထားသော သုတေသနစာတမ်းများကို တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။
မြေပြိုမှု - မုတ်တမပငျလယျကှေ့
ဖနျလုံအိမျဓာတျငှထေု့တျလုပျမှု ၊ ပိုးသတျဆေးမြား နှငျ့ အျောဂဲနဈစိုကျပြိုးရေး
မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရ၏ ရာသီဥတုပြောင်းလဲလာမှုဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်များ
If you would like to learn more about the project, or have any questions, do not hesitate to contact us.
ဤပရောဂျက်နှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမိုသိရှိလိုပါက (သို့) ဤပရောဂျက်တွင် ပါဝင်အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ခဲ့သူများ (တောင်သူလယ်သမားများ၊ ပူးပေါင်းလက်တွဲဖော်များ၊ ရိုက်ကူးထုတ်လုပ်သူအဖွဲ့သားများ) နှင့် ဆက်သွယ်လိုပါက အချိန်မရွေး ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
Tomas Derville: tomas.derville@gmail.com
Beatrice Manole: beatrice.mnl@gmail.com